केयर बालगृहबाट सारिएका बालबालिकाले ‘पुष्पा आमानै चाहिन्छ भनेपछि’…. भिडियो हेर्नुहोस् – Khabar PatrikaNp
केयर बालगृहबाट सारिएका बालबालिकाले ‘पुष्पा आमानै चाहिन्छ भनेपछि’…. भिडियो हेर्नुहोस्
August 7, 2020 71
काठमाडौं / बालगृहमा जिम्मा दिएको बच्चालाई वेवारिसे फेलापारेको भन्दै मिडियावाजी गरेपछि विवादमा आएकी पुष्पा अधिकारीको केयर बालगृहमा रहेका अन्य बालबालिकाको उद्दार गरिएको छ । त्यहाँवाट ११ जना बालबालिकालाई उद्दार गरिएको हो । तर अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भएको छ । जसमा बालगृहका बालबालिकाहरुले आफुहरुलाई सबैभन्दा
बढी माया पुष्पाको लाग्ने बताएका छन् । लाइट नेपाल नामको युट्युव च्यानलका युट्युवरले गरेको प्रश्नमा उनीहरुले आफुहरुलाई पुष्पा आमाको निकै माया लाग्ने गरेको बताएका छन् । सबैभन्दा बढी माया कसको लाग्छ ? भनेर प्रश्न गर्दा उनीहरुले भनेका छन्, पुष्पा आमाको । उनीहरुले बालगृहमा आफुहरुलाई सेवा गर्ने अरु सबैले माया गर्ने पनि बताएका छन् ।
पुष्पालआमाले पनि आफुहरुलाई निकै माया गर्ने बताए । अर्का युट्युवर भाग्य न्यौपानेले आफुहरुलाई अरु माया गर्ने आमासंग लगिदिने भनेको पनि उनीहरुले बताएका छन् । ‘भाग्य सरले हामीलाई पुष्पा आमाले माया गर्नुभयो भने बस होइन भने म अरु माया गर्ने आमाको घरमा लगिदिन्छु । यो संसारमा अरु पनि माया गर्ने धेरै आमा छन् भन्नु भयो’ उनीहरुले एकै श्वरमा भनेको भिडियोमा सुन्न सकिन्छ ।
काठमाडौं कपनको केयर बालगृहमा रहेका यि ११ जना बालबालिकालाई राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदले उद्धार गरेको हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा रहेकी महिला गर्भावस्थामा आएर नेपालमा बच्चालाई जन्म दिएपछि सो बच्चा बालगृहमा जिम्मा दिइएको थियो । तर बालगृहकी संचालक पुष्पा अधिकारीले वेवारिसे फेला पारेको भन्ने देखाउन सडकमा लगेर बच्चालाई राखेकी थिइन् ।
बेवारिसे बच्चा फेला परेको र आफुले संरक्षण गरेको भन्दै मिडियावाजी गरेपछि विवादित भएको सो बालगृहवाट सबै बालबालिकालाई उद्दार गरिएको हो । बुधबार परिषद र केन्द्रीय बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको महिला, बालबालिका एवं ज्येष्ठ नागरिक शाखा
र बुढानीलकण्ठ नगरपालिका– ११ का वडाध्यक्ष राजु अधिकारीको रोहबरमा ११ जनाको उद्धार गरिएको हो । उनले चार वर्ष अघि देखि आफ्नै घरमा बालबालिकालाई संरक्षण दिँदै आएकी थिइन् ।
एक वर्ष यत यस्तै युट्युवरहरुको सहयोगवाट रकम पनि संकलन भएको थियो । उनलाई बच्चा देखाएर पैसा उठाउने धन्दा गर्न लागेको आरोप लागेको छ । तर उनले विदेशमा ब ला त्कृ त भएर गर्भवती अवस्थामा आएकी महिलार्ला सामाजिक लाञ्छनावाट बचाउन आफुले यस्तो गरेको बताएकी छन् ।
वच्चा बेवारिसे फेला परेको भन्दै भिडियो सार्वजनिक भएपछि बच्चाको आमाले आफ्नो सन्तान पनि फिर्ता लिएर गएकी छन् ।
Prevकाठमाडौँ चुच्चेपाटीमा आमाछोरी माथि ए’सि-ड प्र’हार
Nextखानामा किरा भेटिएको भन्दै संक्रमितद्वारा आइसोलेशनका स्वास्थ्यकर्मीलाई आ,क्र,मण
नेपालीको मनमा बस्न सफल चिकित्सक डाक्टर/नर्सकी छोरी सियोनालाई गम्भीर समस्या: उपचारमा २५ करोड लाग्ने सहयोगको अपिल ! (भिडियो सहित)
९ वर्षको उमेर देखि गीत गाउन थालेका राजु परियारले कति कमाए ? दिए यस्तो सटिक जवाफ खेम र मधुको विवादमा पनि बोले
सुसाईड नोट’ लेखेर बेपत्ता भएका डाक्टर भेटिए काभ्रेमा
एका बिहानै माता मनोकामना माइको दर्शन गरी आज भाद्र ९ गते मंगलबारको राशिफल पढ्नुहोस भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस
सोनी हाङ्मा लिम्बुको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु आए मिडियामा, गरे सबैलाई चकित पार्ने खुलासा…! भिडियो हेर्नुहोस (15953)
आफ्नो श्रीमती भगाउनेको श्रीमती लिएर फरार (13599)